Skype စကားပြောဆိုမှုဟောင်းများကိုသင်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလား။ - Skype
အဓိက > Skype > Skype chatting history - ပြresponsesနာများကိုတုံ့ပြန်ခြင်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဤဆောင်းပါးသည် Skype ရှိဖျက်ထားသည့်သမိုင်း၊ ဖိုင်များ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်စကားဝှက်တို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်အကြောင်းဖြစ်သည်။
နည်းလမ်းတစ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် Skype ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုကိုဖန်တီးပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါ။ Tools / Options / Privacy / Privacy ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပါ။
“ သိမ်းရန်သမိုင်း” အပိုင်းကိုရှာပြီးပေါ်လာသည့်မီနူးတွင်သိမ်းဆည်းရမည့်ကာလကိုရွေးချယ်ပါ။ Forever ကိုရွေးပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုချက်တင်သမိုင်းကြောင်းသည်အမြဲသိမ်းဆည်းပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏ချက်တင်ရာဇဝင်၊ အပို့နှင့်လက်ခံသည့်ဖိုင်များအားလုံးကိုအရန်ကူးရန်၊ အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ပါ။ ကို C ကိုသွား: အသုံးပြုသူများ username AppData Roaming Skype ဖိုင်တွဲ။ ဤဖိုင်တွဲတွင် Skype ဒေတာအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ဤကွန်ပျူတာမှ Skype သို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်မည်သည့်အကောင့်များမဆို၊ ဖိုင်တွဲတစ်ခုလုံး၏အရန်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၎င်းဖိုင်များကို flash drive ထဲသို့ကူးယူပါ။ အဆင်သင့်။ operating system ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနောက် (သို့) hard drive ကို format ချပြီးတဲ့အခါချက်တင်မှတ်တမ်းနှင့်ဖန်တီးမှုပြုလုပ်သည့်အချိန်၌ရှိသည့်ပေးပို့လိုက်သောဖိုင်များနှင့်ချက်တင်မှတ်တမ်းကိုပြန်လည်လွယ်ကူစွာပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ folder ကိုကို C သို့: အသုံးပြုသူများ username AppData Roaming Skype ကို Skype ကို install ပြီးနောက်။
နည်းလမ်းနှစ်။ Skype ဒေတာအရံသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိပါကချက်တင်စကားပြောမှတ်တမ်း၊ လက်ခံရရှိနှင့်ပို့သည့်ဖိုင်များအပြင်အကောင့်တစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ Skype Chat History ကိုဘယ်လိုပြန်လည်ရယူရမလဲ Operating system သို့မဟုတ် application ကိုပြန်လည် install လုပ်ပြီးပထမအကြိမ်စတင်သောအခါ Skype သည် chat history နှင့် cloud ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအလိုအလျောက် download လုပ်လိမ့်မည်။
ဤအချက်အလက်သည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း 30 ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒါဆိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်မှာ Skype ရဲ့သမိုင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ သင်ကဒီမှာတည်ရှိပြီးသောတည်ဆဲ main.db ဖိုင်ကိုအစားထိုးသင့်ပါတယ်: ကို C: Users UserName AppData Roaming Skype YourLoginSkype, Skype ၏သမိုင်းကြောင်းအားလုံးပါ ၀ င်သောတူညီသောဖိုင်နှင့်အတူ။
ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်မျိုးရရှိရန်အတွက်သမိုင်းတစ်လျှောက်ရှိပရိုဂရမ်၏မိတ္တူကိုကူးယူထားသည့် hard drive မှ Skype ၏သမိုင်းဖိုင်ကိုပြန်လည်ရယူကြပါစို့။ Hetman Partition Recover ကို run ပြီး hard drive ကိုစကင်ဖတ်ပါ k ။ Wizard ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပရိုဂရမ်ကိုဖျက်ပြီးပြန်ထည့်ပြီးသောအခါသင် Skype မှတ်တမ်းကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်ပါက၊ hard disk ကိုအမြန် scan လုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ operating system ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး / သို့မဟုတ် hard disk ကိုပုံစံချပြီးပါက၊ disk ကိုအပြည့်အဝစိစစ်ပြီးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။ ဤကိစ္စတွင်ငါအပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခု။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုပြီးစီးရန်စောင့်ပါ။ အဆင်သင့် - ပရိုဂရမ်သည်ဖိုင်များစွာကိုတွေ့ရှိသည်။
သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလိုအပ်သောဖိုင်ကိုရှာဖွေရန် search function ကိုအသုံးပြုပါ။ မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ညာဘက်ထောင့်ရှိမှန်ဘီလူးပုံအမှတ်အသားကိုနှိပ်ပါ၊ Search ပေါ်လာသည့် File s window ပေါ်ရှိဖိုင်အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး 'Search' ကိုနှိပ်ပါ။ 'main.db' လို့အမည်ပေးပြီး၊ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနေ့စွဲရှိသည့်သူကိုငါရွေးပြီးပြန်ယူမယ်။
အဆင်သင့်။ C: Users UserName AppData Roaming Skype YourLoginSkype ဖိုင်တွဲသို့သွားပြီးလက်ရှိပင်မ .db ဖိုင်ကိုပြီးခဲ့သည့်ရက် ၃၀ အတွင်းပြန်ထားခဲ့သည်။ ပြန်လည်ထားရှိသည်။
ထိုနည်းတူစွာသင် Skype တွင်လက်ခံရရှိပြီးပို့သောဖိုင်များကိုပြန်ယူနိုင်သည်။ သင်တူညီသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် main.db ဖိုင်အစား၊ Skype နှင့်လက်ခံရရှိထားသောသို့မဟုတ်ပေးပို့လိုက်သောဖိုင်များသို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေနေသည့်သီးခြားဖိုင်များအားလုံးကိုပြန်လည်ရှာဖွေသင့်သည်။
သတိပြုရန်မှာ၊ သင်ပြန်ယူရန်လိုအပ်သည်ကို chat history မှဖိုင်များ၏အမည်များလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါဤနေရာတွင်တည်ရှိပြီးသော 'My Skype ကိုလက်ခံရရှိဖိုင်များ' ဖိုင်တွဲ, ဤဖိုင်ကိုကူးယူ: C: Users UserName AppData Roaming Skype ငါ၏အ Skype ကိုလက်ခံရရှိဖိုင်များ။ ဤနည်းဖြင့် Skype ချက်တင်မှတ်တမ်းသည် Skype သို့မဟုတ် Windows ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း (သို့) hard drive ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောဖိုင်များကိုလက်ခံရရှိပြီးဖိုင်များကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပြသသည်။
Skype အကောင့်တစ်ခုကိုပြန်လည် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန် Skype အကောင့်တစ်ခုပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်မေ့သွားလျှင်အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ဤအရာကိုမပြုလုပ်မီ၊ login နှင့်စကားဝှက်ကိုမစစ်ဆေးဘဲ Skype အလိုအလျောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များကိုပြုပြင်သင့်သည်။ mode ကို။ များသောအားဖြင့်ဒီ option ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်မှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး။ သုံးစွဲသူအတွက် login နှင့် password data တို့ပါ ၀ င်သော config.xml ဖိုင်ကိုသင်လိုအပ်သည်။
သင်သည်ဤဖိုင်ကိုအရန်ကူးခြင်းမှရရှိနိုင်သည်၊ ဤဆောင်းပါး၏ပထမပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုပြခဲ့သည်။ ထိုနောက်မှ, ဖိုင်တွဲကို C ထဲမှာကူးယူခြင်းနှင့်အစားထိုး: Users UserName AppData Roaming Skype YourLoginSkype ။ Skype backup မရှိပါက Hetman PartitionRecovery ၏အကူအညီဖြင့်ဤဖိုင်ကို main.db ဖိုင်နှင့်အတူတူပင်သို့မဟုတ် Skype ဖိုင်များကို ရယူ၍ ပေးပို့နိုင်သည်။
ဒါကအခုအချိန်မှာအားလုံးပါပဲ ရှာဖွေနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ဤဆောင်းပါးသည်သင်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 'Like' ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ။
ခဏအကြာတွင်,Skypeအလိုအလျောက်ပုန်းအောင်းမက်ဆေ့ခ်ျအဟောင်းသင့်ရဲ့ chat window မှ။ ဒါပေမဲ့အဲဒါလုပ်တယ်ဆိုလိုသည်မှာ app သည်သင်၏ချက်တင်ရာဇဝင်ကိုအစဉ်အမြဲဖျက်ပစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်၊စောင့်ပါသင့်ရဲ့ retrieve မှတက် scrolling အပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျအဟောင်းနောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဟာအဆုံးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။၂၉ ဇန်နဝါရီ 2021
ကျွန်ုပ်၏ Skype ချက်တင်ရာဇဝင်ကိုမည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။
လှမ်း ၁။ သင်ကြည့်ချင်တဲ့ chat history ရှိတဲ့သင့် Skype အကောင့်ကိုဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။ အဆင့် ၂။ Skype ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ 'Contacts' tab ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ Skype အဆက်အသွယ်အားလုံးပြသလိမ့်မည်။ အဆင့် ၃။ Skype စာတိုတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့သူနဲ့အဆက်အသွယ်ကိုရှာပါ။ ဆက်သွယ်ရန် အဆင့် ၄။ Skype မျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဖက်မှာကြည့်ပါ။
စီးပွားရေးစကားပြောဆိုမှုများအတွက်ယခင် Skype ကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း။
၁ Skype အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွင့်ပါ၊ သင်၏အဆက်အသွယ်အမည်များစာရင်းတွင်သင်ယခင်ကြည့်ရှုလိုသောလူအားညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ၂ Find ယခင်စကားဝိုင်းများကိုနှိပ်ပါ။ Outlook ဖွင့်လှစ်ပြီးထိုအဆက်အသွယ်၏စကားပြောဆိုမှုများကို Conversation History ဖိုင်တွဲတွင်ဖော်ပြသည်။ ထပ်မံကြည့်ရှုရန် ....
File for Stellar BitRaser သည် Skype chat သမိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ပစ်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသော data ဖျက်ခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ File for Stellar BitRaser သည်အင်တာနက်ပေါ်မှအကောင်းဆုံးဒေတာဖျက်ခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်၎င်းကိုအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကျယ်ပြန့်သောလုပ်ဆောင်ချက်များစာရင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Skype အကောင့်မှတ်တမ်းကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်နည်း။
သင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါကသင်၏ရွေးချယ်မှုကိုအတည်ပြုရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ပယ်ဖျက်ရန် 'Clear History' ကိုထပ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ် popup box ၏အပြင်ဘက်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ပြီးဆုံးပါက Skype သို့ပြန်သွားရန် Options menu ၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ 'back' မြှားကိုနှိပ်ပါ။